स्वास्थ्य Archives - Samasta Khabar
नेपालीले मनपराउने यस्ता खानेकुरामा क्यान्सरको सम्भावना । पूरा पढ्नुहोस् सचेत रहनुहोस् ।
क्यान्सरलाई निकै नै घातक रोग मानिन्छ । क्यान्सर ठ्याक्क यो रोगले मात्र लाग्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । यो रोग लाग्नुमा केही मात्रामा मानिसहरुको खानेकुरा पनि एक प्रमुख कारण हो । क्यान्सरबाट बच्न खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । क्यान्सर लाग्नसक्ने खानेकुरा तल उल्लेख गरिएको छ । १. रक्सी रक्सीको कारण घाँटी, कलेजो, छातिजस्ता स्थानको क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ । विकल्पः यदि रक्सी साँच्चै छाड्न चाहने हो भने त्यसको मात्रा बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ । २. रातो मासु रातो मासुमा हुनसक्ने हाइड्रोकार्बन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ । विकल्प : सकेसम्म रातो मासु नखाने…
गुदीभन्दा बोक्रा राम्रो, यस्ता छन् फाइदैफाइदा !
हामी कुनै फलफूल भन्ने बित्तिकै गुँदी नै झट्ट याद गर्दछौँ । अझ फलफूल भेट्नेबित्तिकै हामी बोक्रा तास्न वा त निकाल्न तम्सिहाल्छौँ । विज्ञानको कसीमा घोटेर हेर्ने हो भने यी भनाइहरुको सार अत्यन्तै गलत छ । यसलाई बदल्नु जरुरी छ । मानिसहरु फलफूल वा तरकारी खाँदा बोक्रा खान मन पराउँदैनन् । वास्तवमा गुदीको तुलनामा बोक्रा बेस्वादिलो, खान मन नलाग्ने वा अलि अप्ठ्यारै खाले पनि हुन्छ । तर फलफूल तथा तरकारीका बोक्रामा पनि शरीरलाई फाइदा दिने प्रशस्तै मात्रामा भिटामिनलगायतका तत्वहरु पाइन्छन् । गुदीमा भन्दा पनि बढी भिटामिन, मिनरलहरु बोक्रामा पाइने कति फलफूल…
५० सरकारी विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड
29th January 2019 avigo
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडाका ५० वटा सरकारी विद्यालयका छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्राहरुका लागि सेनेटरी प्याड बितरण गरेपछि महिनावारी भएपछि घर फर्किनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अधिकांश छात्राहरुले महिनावारीको बेलामा विद्यालय छोडेर घर बस्नुपर्ने समस्यालाई हटाई महिनावारीका बेलामा पनि सहज तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पढ्न पाउन भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ । साथै यो समस्या न्यूनिकरण पनि भएको मेयरले बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक छात्राहरुलाई पुग्ने गरी यो अभियान चलाएको हो । वितरण मात्र नभई प्याड प्रयोग गर्नका लागि…
स्वाइन् फ्लु कि मौसमी रुघाखोकी ? फरक छुट्याउनका लागि पूरा पढ्नुहोस् ।
रुघाखोकीको मौसम भनेकै जाडो मौसम हो । रुघाखोकी कारण चिसोले गर्दा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसमाथि मौसमी रुघाखोकीको जड त चिसोलाई नै मान्दा खासै फरक पर्दैन । स्वाइन फ्लु भएको भ्राम खबर फैलिरहेको बेला स्वाइन फ्लु र रुघाखोकीबीचको फरक छुट्याउनका लागि पूरा पढ्नुहोस् । मौसमी रुघाखोकी र स्वाइन फ्लु बीचको फरक स्वाइन फ्लु र रुघाखोकी विल्कुलै फरक कुरा हो भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । गुर (स्वाइन)बाट मानिसमा सर्ने स्वाइन फ्लु बंगुरबाट मानिसमा विरलै सर्ने गर्छ । यद्यपी, यो रोग अहिलेसम्म नेपालमा देखा परेको छैन ।…
दाह्री पाल्नेहरु छिटो बुढो नहुने, दाह्री आउनका लागि उपायहरु हेर्नुहोस्
16th January 2019 avigo
क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार दाह्री पाल्नु स्वास्थ्यका लागि निकै नै लाभदायक रहेको बताएको छ । दाह्रीले विभिन्न खालका विकिरणबाट बचाउने सो अध्ययनले जनाएको छ । दाह्री पाल्ने मानिसहरु परावैजनी विकिरणबाट सुरक्षित हुने देखाएपछि यसले छालाको क्यान्सर हुन बाट समेत बचाउने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ । यसले याति मात्र नभएर बुढो हुने प्रक्रियामा पनि सुस्त पार्ने बताइएको छ । दाह्री आउनका लागि तलका उपायहरु अपनाउनुहोस् आजभोलि दाह्रीको फेसन निकै चलेको छ । यदि तपाईको दाह्री आउँछ र अर्को तपाईको साथीको दाह्री आउँदैन भने पक्कै पनि उसले तपाईँसँग गुनासो गरेकै हुन्छ दाह्री कसरी…
जाडो महिनामा बदाम खानुका फाइदाहरु हेर्नुहोस्
14th January 2019 avigo
मौसम चिसो अनि पारिलो घाम । घाममा बसेर बदाम खानुको मज्जा नै बेग्लै छ । आनन्द लिँदा लिँदै स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदा छ । हामीलाई ख्याल नहुन सक्छ तर यसको फाइदा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै मात्रामा छ । दुध पिउन मनपर्दैन वा पिउनुहुँदैन भने बदामको सेवन गर्नुस् यसमा पाइने प्रोटिनले शरीर वृद्धिका लागि निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ । बदाम सेवन गर्नुका फाइदाहरु –तौल कम गर्न मद्धत पुर्याउँछ बदामको सेवन पश्चात् लामो समयसम्म भोक लागेको महशुस हुँदैन । जसले गर्दा धेरै खानमा कमी आउँछ र तौल कम गर्न सजिलो हुन्छ…
माघे संक्रान्तीमा खिचडी खानुका यस्ता फाइदा ! शाकाहारीका लागि विशेष !
10th January 2019 avigo
नेपालमा विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म छन् । धेरै चाडपर्व भएको देश नेपालमा माघे संक्रान्ती पनि एक मानिन्छ । विशेषत : मगर र थार जाति ले भव्य रुपमा मनाउने माघे संक्रान्ती र माघी पर्व, हिन्दू जाति सबैले मनाउने गर्दछन् । यस पर्वमा चाकु, तरुल, सखरखण्ड, तिलको लड्डु, घिउ साथै खिचडी खाने प्रचलन छ । अन्य कुराहरु खानुको महत्व त छँदै छ । तर खिचडी खानुको फाइदा भने यहाँहरु लाई थाहा नहुन सक्छ । अधिकांशको सोचाइ के छ भने खिचडीलाई जाउलो जस्तै मानेर बिरामीले खाने कुरा हो भन्ने सोचिन्छ । तर यसले…
जाडोमा बाँसको तामा खानुको फाइदा ! किन खाने र कसरी ?
9th January 2019 9th January 2019 avigo
बाँसको तामा, हाम्रो स्थानीय परिकार हो । हामी सबैले खान्छौँ । सिजन बाँसको तामा भए नभएपनि जाडो मौसममा यसको उपभोग निकै लाभदायक छ । हामी विभिन्न तरिकाले बाँसको तामाको सेवन गर्ने गर्छौँ । जस्तै : अचारको रुपमा, सुप या त तरकारीको रुपमा । हुन त हामीले बनाउने बाँसको तामाको परिकार सीमित पक्कै छन् तर विदेशमा सयौं तरिकाले यसको परिकार बनाईन्छ । यसका फाइदाहरु : -कार्बोहाइडे्डको मात्रा कम हुने बाँसको तामामा मधुमेह रोगीहरुका लागि यो निकै फाइदाजनक हुने गर्दछ । -क्यालोरी कम हुने हुनाले बाँसको तामा तौल घटाउन इच्छुक हरुका लागि…
सुत्दा सिरानीमुनी लसुन राखेर सुत्नुहोस् । पढ्नुहोस् यसका फाइदाहरु !
1st January 2019 avigo
लसुन सबैको भान्साको साझा तरकारी भन्दा पनि हुन्छ । संसारका हरेक भान्साहरुमा यसको प्रयोग हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । तर यहाँ कुरा छ सुत्दा सिरानीमुनि लसुन राख्ने । के तपाईलाई थाहा छ केही मानिसहरु सुत्ने बेलामा आफु सुत्ने सिरानीमुनि किन लसुन राख्दछन् ? अधिकांश मानिसहरु जसलाई निद्रा पर्दैन वा निदाउन धेरै समय लाग्दछ त्यस्ता मानिसहरुले लसुनको केही पोटी सिरानीमुनि हरेक रात सुत्दा राख्नाले उनीहरुको सुत्ने शैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास गर्दछन् । स्टेप्स टु हेल्थ भन्ने वेभसाइट का अनुसार लसुनमा पाइने सल्फर तत्वले साथै यसको वास्नाले व्यक्तिमा सुत्ने शैली…